Ekwindla ukushisa kwehla, kodwa ngubani owathi imvakalelo yethu kufuneka iwele kunye ne-thermometer? Iingcebiso ezimbalwa ezilula ziyakunceda uguqulele imibono yehlobo eqinisweni nangona ixesha litshintsha. Yaye khumbula: umoya weeholide unakho (kwaye kufuneka ufune) ukuphinda ubuyele ekhaya.
Ngamnye wenu uqhelana nomvakalelo wokuvuselela ngokomoya, kunye nekhefu elihle. Ngomso ukuvusa amandla, uphumule kwaye uzele ukuphefumlelwa. Izicwangciso ze-Grandiose zixubile ekhanda lakho kwaye zibonakala zingenakwenzeka kwakhona: "Xa ndifika ekhaya, ndiza kuqhuba iblogi," "Ngomyeni wam siza kuphuma rhoqo ngemihla," "Ndiya kuvuka."
Ingxaki yukuthi emva komnyango wangaphambili wezindlu zakho zokuhlala uhlala ungadibana nolwandle lwamathuba, kodwa kwintaba yokungatshanjiswa kwempahla kunye neeninzi zeengxaki ezingenakutshintshwa kwimizi. Yeyiphi iblogi enkulu, ukuba umphathi ubathumele ii-imeyili ezintathu kunye nemfuneko yokubhala kwakhona ingxelo yokugqibela. Kwaye kuqala ukukhanya kwangaphambili. Kwaye ngoku akukho mzekelo we-summer energy ...
Ukuxhathisa ukuwa kunye nomsebenzi ongenamsebenzi, sicinga, kwaye siyazisola sibeka izicwangciso kwireferensi yangasemva yekhabhinethi, apho i-frivolous sarafans kunye neekhati zentambo sele zilindele ihlobo elizayo. Nangona kunjalo, akufuneki ukwenza oku. Isimo sengqondo esifanelekileyo, impembelelo enokuthi siziva ngayo ngexesha leentsuku ezifudumeleyo, ayixhunyekanga kuphela kwaye ayinakuninzi kunye nendalo engqongileyo yendalo kunye neeholide, kodwa kunokuba unesimo sengqondo esilungileyo ongayifumana ekhaya. Le ngcebiso elula kwaye iqinisekisiwe iya kukunceda ukuba ukholelwe ukuba iholide yimiqondo yengqondo, kwaye amaphupha asehlobo ajika abe yimpumelelo yangempela yekwindla!
Ukuba ungekho ubuchule, yintoni ongayenza ...
Ukugqithisa kwamava amatsha kuyisitshixo ekuveleni, ngoko ke nayiphi na, nokuba luhambo olufutshane, lusenza sifune ukuqala ukwenza amanqaku okuhamba okanye ukuthenga i-albhamu nokwenza imidwebo, okanye ukucinga ngento eqhelekileyo. Ungavumeli ukuhamba kweengcinga zakho zokudala kuphelelwe! Ukuphefumlelwa akuzange kushiye kwisixeko, zama oku kulandelayo:
Hamba indlela ende
Gweba iindlela eziqhelekileyo ezikhokelela kwindawo yokuthengisa, i-gym okanye ivenkile. Gweba ukusuka kwindlela ehlanjululwe kakuhle okanye edibeneyo kwaye uziphophezele ukuba uqaphele ngqalelo iinkcukacha ezijikelezayo. Lungisa zonke izinto ezithakazelisayo ngoncedo lwezicelo ezizodwa ze-smartphone - iifoto zokuphonsa kunye namavidiyo, ukunyelisa amathenda amfutshane. Ukupapashwa kunye neengqungquthela ezigqithisileyo, iibhotshi zeerubha ezikhanyayo kumntu okanye kwintaba enqabileyo yamaqabunga aweleyo angakukhuthazela kwingqungquthela, ukubhaliswa kwebloki okanye ukudalulwa kwesikripthi.
Esinye sezizathu ezibangela ukuba uhlale uhlala eholide kukuba, ekungabikho komsebenzi, i-intanethi, i-traffic jams kunye nezinye iingxaki, ulala kakhulu (kakuhle, okanye kufuneka okungenani). Ngexesha lokulala, ubuchopho bakho buhamba kwaye bujongana ngamabomu ngolwazi olufunyenweyo kwimihla, ngamanye amaxesha luyifumene nokuqhagamshelana koqobo. Ukuba sicinga ukuqonda komntu ngendlela yefayili yefayili endala, njengelayibrari enye, ke onke amaqabunga kunye neepakethi zephepha ziya kubalwa ngokulandelelana ngendlela evukileyo, kwaye umntu olalayo uya kuxutywa kuloo ngxaki yokudala eyakhayo eyenza bonke abakwaziyo. Ukuba unamathele ekupheleni kokuphela kokudala, qalisa ngokucacileyo umsebenzi ("Ndifuna igama elingalibalekanga kwisitoreji sam esitokisini!"), Uze uye kwicala. Kukho amathuba okuvuswa nesisombululo esilungele ingxaki!
Ukuba awunayo amandla okwaneleyo nokuzinikezela, yiyiphi ixesha lokuyenza ...
Gxininisa "apha nanamhlanje"
I-rustle yamagagasi, imbono yeentaba, ukuhamba kwamafu-kwiholide ubuhle bendalo ejikelezayo lubeka sisisombululo sokucamngca kwaye sinceda ukususa ingqondo engathandabuzekiyo kunye nexhala. Idatha yakutshanje ibonisa ukudibanisa ngqo phakathi kokucamngca kunye nokusebenza kwengqondo yengingqi ejongene nemisebenzi enzima kakhulu. Unokucamngca apho uthanda khona, nokuba uhambahamba ezitalatweni-ngalesi sihlandlo, unqamle unyawo lwakho lokunene endleleni, utsho ngengqondo "ulungile", uphinde uphinde ulandele okufanayo. Musa ukuphazanyiswa ngabadluli kunye neepuddles. Unako ukuhlamba izitya. Ukungavumeli ukuzenzekelayo kokunyakaza ukuba kukudlulisele kwisihogo ukusuka apha "ngoku kwaye ngoku." Ngokugxininisa okwangoku, unganakunqumla kwi-stimuli yangaphandle kwaye uphephe iingcamango ezingavelanga.
Kwiholide, asifuni ukujonga iposi nganye ngemizuzu elishumi. Kwaye kwimeko yokuphumula ihamba kakuhle! Ngenye imini ngokuhlwa ngeveki, yitsho isigqibo sokuba "cha" kuyo yonke into eneskrini, kwaye uzinike ixesha elifanelekileyo ukuseta imidlalo kunye nosapho, ukucoca, ubuchule. Musa ukulibala ukuqaphela indlela engcono ngayo oyiva ngayo ekuseni.
Ukutshiza imifuno emitsha kukuqinisa amandla ethu okugxininisa. Kwaye izicumba ezivuthayo ziyakwenza ngcono isantya sokujonga ulwazi olutsha nge-17%. Ekubeni zonke izinto sele ziqhambile kwimvelo, sebenzisa izimangalo ze-perfume: zibeke iincontswana zeentyatyambo zeentyantyambo kwisandla sakho kwaye uthathe umoya ophefumlelweyo.
Qala ukulungiselela into ebalulekileyo
Umsebenzi wokutshitshisa imizuzu emashumi mane anesihlanu kunye nemizuzu engama-15 ikhefu ukuya "ukusetha kabusha" kuya kukuvumela ukuba ugcine umgangatho ophezulu wokuvelisa ukuhlwa. Esi sisigqibo esifikelwa ngabaphandi base-Columbia University. Ngoko ngoku unokusebenza kwaye ube novila!
Ukuba unganomdla okwaneleyo, yilokho okumele ukwenze ...
Baye bacinga ukuba: eholidini, ibhedi enkulu kunye neesiteksi ezityebileyo zisithandile ngaphezu kweTV, ukukhumbula ukuzonwabisa okukhohliweyo, phakathi kokulala apho kwindawo yokugqibela ... Imfihlelo yokukhangelwa kwezesini zehotele iyinto enokutsha, kodwa inokuphindwa ekhaya! Ungayihoyi igumbi lokulala, hlola amathuba okugezela, igumbi lokuhlala, umzila okanye iholo. Sifakazela into engaziwayo, ngoko uzama ukujika ubusuku obunokuthula ibe yintengiso, kwaye umvuzo uya kuba nesondo esingalibalekiyo.
Ukuvakalisa iimvakalelo zakho
Ngexesha lokuphumla, uhlala uqaphela (kwaye uqaphele) izakhono zomlingane wakho, nokuba isipho sokuhamba kwisixeko esikhulu ngaphandle kwekhadi okanye ukukwazi ukuxoxisana nesaphulelo kunye nomthengisi ongathandekiyo. Ngoko kukuthintela ntoni ukujonga umhlobo wakho kwikhaya elitsha kwaye uvakalise ukuba uyamhlonela? Uphando olutshanje luye lwazisa ukuba imibhangqwana ebhala imihla yonke into ayibongayo ngayo ivakalelwa ngakumbi kunye kwaye ivuya. Ngoko ke, yonke imihla uxelela izinto zakho ezithandekayo ubuncinane izinto ezintathu ezithandekayo, umzekelo: "Yeka indlela enhle ngayo ukuba undenzele itiye." Yabona, uya kukuhlawula ngokufanayo.
Yenza usuku olufanelekileyo kwaye mvumele iqabane lizinqume indlela angathanda ukuyisebenzisa ngayo (into efana nokuxoxa ngenkqubo yosuku ngosuku lwesidlo sasekuseni ngeeholide). Ngokuzimisela ukwamkela naziphi na izicwangciso, umgca we-marathon wemihla ngemihla ukhangelele uluhlu oluneenkcukacha zeendawo ze-cowboys okanye i-marathon ehluke ngokupheleleyo, eboniswe kumabhayisikobho ngokuthi "18+". Oku kuya kukuvumela ukuba bobabini nishukunyiswe kancinci, kwaye umthandayo uya kuqonda ukuba uyayixabisa kwaye uyayihlonela iminqweno yakhe.
Inkonzo yamagumbi mhlawumbi enye yezona zikhulu zeholide. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kunelungelo lokwenza ngathi uhlala ehotele, ukuze ulandelelana ngeso simo-nokuba uhlala ekhaya. Yenza iingubo zelinen e-fresh, i-candle ekhanyayo, ubeke iintyatyambo kwi-vase, ulawule ukutya kwindawo yokutyela oyithandayo, kwaye uya kufumana iindlovukazi, njengehotele yeenkwenkwezi ezintlanu ... Ibhonasi: akudingeki unike nabani na isipho.
Ngaba uyayikhumbula kakuhle uthando lwakho lokuqala? Inokwenzeka ukuba, umntu onenhlanhla akazange akrokre ukuba unama-pajamas, kuba awuzange umbone. Ukuba ufuna ukuthatha ubomi bakho besondo kwizinga elitsha, kufuneka ufumane umkhwa wokulala uhamba. Ukungabikho kwamapaijama kuwe kukuthumela iimpawu ezilungileyo kumntu: ukukhupha isikhumba kwesikhumba kufundwa ngokungathandabuzekiyo njengesibonakaliso sesithando kunye nesimo sengqondo.
Umsebenzi wokudala: izibuko ngaphakathi
Uyilo lwangaphakathi kwi style Gothic
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adle imifuno?
Ukungaphumeleli kwamabhinqa kunye nobuhle emehlweni abantu
Uxolo, khula! UMikheil Saakashvili ephahleni wavula i-intanethi: i-mums ehle kakhulu kunye namahlaya
Impembelelo yobuthongo kunye nokuxinezeleka kwimpilo yesikhumba
Iqoqo lebhanki elikhanyayo i-SOKOLOV Cruise 2017
Kutheni amadoda athi "Hayi"